Buffalo Hump ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ Bezzia
Buffalo Hump ဆိုတာဘာလဲ
တောရက်စ် | 20/07/2021 20:00 | ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှခန္ဓာကိုယ်သည်တစ်ခါတစ်ရံပြန်လည်မရ၊ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့်အပြောင်းအလဲများအနက်တစ်ခုမှာလည်ပင်းinရိယာ၌ထောင်တစ်ချောင်း၏အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။ သူ၏အမည်ရင်းမှာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်သည်၎င်းကို Buffalo Hump ဟုလည်းလူသိများသော်လည်း။
မင်းရဲ့လည်ပင်းမှာဒီသေးသေးလေးရှိသလား၊ အဲဒါကိုဖယ်ရှားဖို့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား။ ဘာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာရတာလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းပြောပြပါမယ်။ ၎င်းကိုမည်သို့ဖယ်ရှားနိုင်သည်၊ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုတိုးတက်စေရန်သင်လုပ်နိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းများ သင့်ရဲ့ကျောကနေ။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောရောဂါမဟုတ်သော်လည်းအချို့သောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သောအခါမသက်မသာဖြစ်နိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီဟာကိုသင့်ကိုဗေဒင်အဆင့်မှာနှောင့်ယှက်တာလဲဆိုတာငါသိတယ် ပြန်အဆင်မပြေ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားမှန်ကန်မှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးသည်။ Buffalo Hump ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင်နိုင်လဲ၊ ပြန်ပေါ်လာခြင်းမှကာကွယ်ရန်သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ.
1 Buffalo Hump ဆိုတာဘာလဲ
2 Buffalo Hump ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
Buffalo Hump သည်လည်ပင်းinရိယာရှိဖောင်းကွေးသို့မဟုတ်ကွေးသောtheရိယာ၏အသွင်အပြင်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဒီလိုမျိုးတဲ၊ ၎င်းသည်အဆီများစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ရောဂါများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည် ပိုမိုလေးနက်သောထိုကဲ့သို့သောအရိုးပွရောဂါအဖြစ်။ တောင်များအပြင်ရောဂါများတွင်အခြားလက္ခဏာများပေါ်လာသော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းလေးနက်သောအရာနှင့်မဆက်စပ်သင့်ပါ။
သို့သော် Buffalo Hump အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်မတူညီနိုင်ပါတယ်:
အဝလွန်ခြင်းဖြေ - ခင်ဗျားတို့သိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း Buffalo Hump ကအဆီတွေစုနေလို့ပေါ်လာတယ် အဝလွန်သူသို့မဟုတ်အဝလွန်သူများသည်၎င်းအတွက်ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိသည်.
အချို့သောဆေးဝါးများသုံးစွဲမှု: ဂလူးကော့ကိုကိုတိုနီယိုဆေးများဖြင့်ရေရှည်ကုသမှု၊ cortisone.
မကောင်းတဲ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြေ။ ကျောရိုး၏မမှန်ကန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြစ်သည် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခု အရာအားဖြင့်အဆီလည်ပင်း၏areaရိယာ၌စုပြုံ။ ၎င်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းကသင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
Buffalo Hump ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
ဒေသတွင်းရှိအဆီများကိုဖယ်ရှားရန် liposuction အပါအ ၀ င် Buffalo Hump ကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ပထမအဆင့်မှာ အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေနှင့်၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကနေထကုသစတင်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အဝလွန်မှုဖြစ်ခဲ့လျှင်ပထမ ဦး ဆုံးမှာအာဟာရရှိသောအာဟာရပညာရှင်များ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကျန်းမာသောအစားအစာဖြင့်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့သောအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပွားသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်ဇီဝကမ္မကုထုံးပညာရှင်နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Buffalo Hump ကိုပြုပြင်ရန်သင့်အားကူညီပေးသကဲ့သို့၎င်းသည်ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အနာဂါတ်တွင်ပေါ်ထွက်လာမှုကိုကာကွယ်ရန်သင့်အားလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပေးလိမ့်မည်။ ဆေးကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အခြားနည်းလမ်းရှာရန်အထူးကု၏ရုံးခန်းသို့သွားရန်လိုအပ်သည်.
ဗေဒကုသမှုအပြင်, အချို့ရှိပါတယ် ကျွဲများဖယ်ရှားပစ်ရန်အလွန်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်း.
ရင်ဘတ်ဓာတ်လှေကား: ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖျာတစ်ခုပေါ်မှာအိပ်ပြီးမင်းရဲ့လက်မောင်းကို ၄၅ ဒီဂရီထောင့်ရှိသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာထားပါ။ မင်းရဲ့ကျောရိုးကိုတတ်နိုင်သလောက်ဆန့်ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်ကျောကိုတင်ထားပါ။ အခုတော့ သင့်ရဲ့ပခုံးဓါးသွားညှစ်နေစဉ်သင့်ရင်ဘတ်ကိုချီ။ ဒီအနေအထားကို 10 စက္ကန့်ကြာအောင်ထားပါ။ မူလနေရာကိုပြန်သွားပါ။ 10 ကြိမ်နှစ်ခုစုံအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ပါ။
လက်မောင်းဓာတ်လှေကားသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုနံရံ၊ ဦး ခေါင်း၊ ပခုံးများ၊ ဒေါက်နှင့်တင်ပါးဆုံရိုးပေါ်တွင်ဆန့ ်၍ ကောင်းစွာဖိထားပါ။ သူတို့ပခုံးများနှင့်အတူအဆင့်အထိသည်အထိ, သူတို့ကိုမြို့ရိုးကျော်သူတို့ကိုလျှောခြင်းဖြင့်သင်၏လက်ကိုမြှောက်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်, ဦး ခေါင်းကို ဦး ချခြင်းမပြုရဤနည်းဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ တစ်ကြိမ်လျှင် ၁၀ ကြိမ်လျှင် ၁၀ ခုံစီလုပ်ပါ။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းများကိုနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခြင်းကသင်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုတိုးတက်စေပြီး Buffalo Hump ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချနိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ရေကူးခြင်းစသည့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုသင်ထပ်မံထည့်သွင်းပါက, သင်ယေဘူယျလမ်းအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလည်ပင်းအဖြစ်ဒေသများရှိအဆီစုဆောင်းခြင်း၏ပျောက်ဆုံးမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်။ သင့်ရဲ့အစားအစာကိုပုံမှန်ဂရုစိုက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » Buffalo Hump ဆိုတာဘာလဲ